12 Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu
Izingelosi, okusha, amawindi agqamile ngombala opendwe ngengilazi, yizici ezimbalwa zezici ze- 12 amasonto ababhishobhi athakazelisa kakhulu eYurophu. Yonke i-cathedral yinde, okukhudlwana, futhi eheha kakhulu kunenye, ngayinye enezici zokunye.
1. IDuomo Cathedral, Milan
IMilan iheha izigidi zabavakashi minyaka yonke. Isonto likaMilan, IMilan Cathedral uphawu olulodwa oluzokumangaza kusukela ekuboneni kokuqala. Kuthathe 600 iminyaka yokwakha isonto elikhulu kunawo wonke e-Italy, nenhle, ngomusa, futhi emangalisa ngemabula ekhanyayo ebomvu.
Amafasitela engilazi angcolisiwe, izakhi ze-gothic, nesifanekiso segolide saseMadonnina phezulu ezinye zezinto ezimbalwa ezizokuthakazelisa. Ngakho, uma ufisa ngempela ukubabaza isonto lombhishobhi laseMilan elithandekayo, khona-ke ungahamba ophahleni lwendlu. Ngakho, Isonto lombhishobhi iMilan yilona kuphela isonto elikhulu emhlabeni, lapho ungahamba khona phezu kwendlu.
UFlorence uya eMilan Ngesitimela
UFlorence uya eVenice Ngesitimela
EMilan kuya eFlorence Ngesitimela
IVenice iya eMilan Ngesitimela
2. ISagrada Familia Cathedral, Barcelona
I-cathedral okuwukuphela kwayo esaqhubeka kusukela lapho 1882, Isonto lombhishobhi iGaudi's Sagrada Familia, kuwumsebenzi wobuciko. Isonto lombhishobhi iSagrada liyinhlanganisela yeSpain Late Gothic, Ubuciko Nouveau, kanye nezakhiwo zeCatalan Modernism. Umklamo kaGaudi wawungowakhe 18 izigaxa, ukumela 12 abaphostoli, Intombi uMariya, abavangeli abane, noJesu Kristu omude kunabo bonke.
Ngaphezu kwalokho, ngalinye lala ma-facade amathathu anengaphandle ehluke ngokuphelele: olungaphambili lwesifiso, Inkazimulo, kanye ne-facade facade. Ngakho, kuningi ongakubona nokukuthola, hlela kahle uhambo lwakho oluya eBarcelona, ukuze ungaphuthelwa yile cathedral emangalisayo.
3. Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu: IKathedral yaseKolner, Cologne
Yakhelwe ngaphezulu 7 amakhulu eminyaka, iCologne Cathedral iwuphawu oluhlaba umxhwele lokwakhiwa kwamaGoth. Ngaphezu kwalokho, IChedral cathedral iyisihlalo soMbhishobhi Omkhulu waseCologne kanye nesonto elide kakhulu entwasahlobo kulo lonke elaseYurophu.
Ngokuthakazelisayo, lesi sici esihle sasiyisibaya esizinzile kanye notshani ngesikhathi seFrance Revolution. Namuhla, ngeke ubone noma yiziphi izinsalela zalesi sigaba emlandweni wesonto lombhishobhi. Ingaphakathi lihle nje nengaphandle elinamawindi engilazi namabala. IKolner Dom iphefumula ikakhulukazi ebusuku kanye nezibani zokushona kwelanga.
IBerlin iya e-Aachen Ngesitimela
IFrankfurt iya eCologne Enesitimela
IDresden iya eCologne Ngesitimela
I-Aachen iya eCologne Enesitimela
4. I-Basilica yaseSanta Maria Del Fiore, Florence
Okuphinki, okuluhlaza okukhanyayo, kanye nemabula emhlophe emhlophe, Phansi kwamatshe ngaphakathi, iBasilica di Santa Maria eFlorence iyisonto lombuso omkhulu lokuvuselela kabusha. Ngaphezu kwalokho, Amafresco kaGiorgio Vasari weLate Judgment ophahleni akufanele aphuthelwe abathandi bezobuciko.
Isonto lombhishobhi laseFlorence lingaphezu kwengqophamlando. Noma ungathandi ubuciko, le cathedral izokuthakazelisa futhi ikugcine ubabaza ubuciko obumangalisayo amahora. Uma udinga umoya ophefumulayo, bese ukhuphukela eBrunelleschi Cupola ngemibono kaFlorence omlingo.
URimini uya eFlorence Ngesitimela
IRoma iya eFlorence Ngesitimela
I-Pisa iya eFlorence Ngesitimela
IVenice eya eFlorence Ngesitimela
5. Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu: UCharles Cathedral, Vienna
Uphawu lwaseVienna, St. ICharles Cathedral iyamangalisa e-facade emhlophe nasendlini ekhanyayo eluhlaza. Yakhelwe ngesitayela seBaroque, St. ICharles cathedral iheha izivakashi kusukela 19th ekhulwini. Isonto lombhishobhi lalenzelwe ukuhlonipha usanta uCharles Borromeo, okuphakelayo, nongqongqoshe wokuhlupheka ezinhluphekweni zaseYurophu ku 16th ekhulwini.
Nokho, isici esithakazelisa kunazo zonke seSt. UCharles Basilica yiyona 1250 ama-square metres fresco ku-copula. Ngokungafani namanye amasonto ababhishobhi baseYurophu, lapha ungathatha ikheshi ye-panoramic ukubabaza i-fresco eduze. Ngakho, ukuphetha, St. Isonto likaCharles eVienna akufanele liphuthelwe kuwe idolobha break iholide eYurophu.
6. Le Mans Cathedral, France
Kunikezelwe ku-Saint Julian, umbhishobhi wokuqala waseLe Mans, Le Mans Cathedral, iyinhlanganisela enhle yokwakhiwa kwesitayela se-French Gothic kanye ne-Romanesque nave. Esinye sezici ezihehayo esizodonsa ukunaka kwakho ama-buttresses asekela ingaphandle kumklamo omuhle. Ngakho-ke ingaphambili leLe Mans Cathedral lingelinye lamahle kakhulu eYurophu.
Ngaphezu kwalokho, ingilazi enamabala nezingelosi ezidwetshiwe ophahleni lwesonto lombhishobhi kunezela eLe Mans’ ubuciko obumangalisayo futhi kukushiyela ingcebo eningi ongayithola ngaphakathi kwaleli khedralali elineminyaka engama-500 ubudala.
UDijon eProvence Ngesitimela
EParis eProvence Ngesitimela
ILyon eProvence Ngesitimela
IMarseilles eProvence Ngesitimela
7. Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu: St. SikaPawulu Cathedral, London
Kubusa phezulu eLondon, kodwa ngaphandle, ISaint Paul's Cathedral akuyona enye yezimpawu ezihlaba umxhwele kakhulu. Ubuhle beSt. Isonto likaPaul lizoziveza uma uzinika isikhathi sokungena. Khona-ke, uzomangala lapho kudlalwa umhlobiso omhlophe nomnyama. Ngaphezu kwalokho, izindlu zesonto elikhulu ngaphezu 300 izikhumbuzo zekhethelo laseBrithani, njengoWren uqobo owaklama i-cathedral enhle kakhulu.
Nokho, enye yezinto ezithakazelisa kakhulu eSt. Paul’s Cathedral yigalari yokuhleba. Yebo, uma uhleba ngakolunye uhlangothi lwegalari, izindonga ziyokuthwala ziye komunye umkhawulo.
8. ICathedral YaseBerlin
Naphezu kokulimala kabi eWWII, IBerlin Cathedral iyi-cathedral emangalisayo enomthombo notshani obuluhlaza ngaphambili. IBerlin Cathedral yakhiwa njengengxenye yesigodlo sedolobha laseBerlin, kodwa umklami wezakhiwo uJulius Carl Raschdorff wayiguqula ukuze ikhombise inkazimulo nobukhulu beSt. Paul’s Cathedral eLondon. Kuphela ku- 1993, ukuvuselelwa kwaqedwa, ngemuva kokuwa kodonga olukhulu lwaseBerlin.
Izinto ezithakazelisa kakhulu eKhathedrali yaseBerlin yi-fresco, imihlobiso yegolide, nezithombe. Ngaphezu kwalokho, isitho se-Saucer ngomculo waso onothando noncibilikisa inhliziyo yisitho sokugcina futhi esikhulu kunazo zonke kwezothando eJalimane kufanele sinikele isikhathi sokuhlala kanye nokufakwa kuhlu nje. Ngakho, khuphukela endaweni yokubuka yokubukwa kwedolobha laseBerlin ukuze uqedele ukuvakasha kwakho kokukodwa kwe- 12 amasonto ababhishobhi athakazelisa kakhulu eYurophu.
9. Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu: Ongcwele Basil's Cathedral, Moscow
Omunye izindawo ezithakazelisa kakhulu ukuvakashela eRussia iSanta Basil's Cathedral eMoscow. Awungeke uphuthelwe yile cathedral emangalisayo futhi uzoyibona kunoma iyiphi indawo eRed Square nangaphezulu. Njengoba usondela, isonto eliphakathi namanye amasonto ayisishiyagalolunye azungezile.
Isici esithakazelisa kakhulu ukuthi la mathempeli axhumene nezindima ezikhethekile ezivalekile. U-Ivan the Terrible wayengungqondongqondo ngemuva kwethempeli iSaint Basil, futhi izindlu ezinemibala eminingi ziyimfihlakalo kuze kube namuhla. Ngenkathi lolu hlobo lomklamo luvele ngekhulu le-17, kepha ukukhetha imibala akaziwa.
10. I-Notre Dame Cathedral, Paris
Ama-gargoyles aphakama namafasitela anengilazi 2 yezici ezizokuheha njengoba kuzoba njalo nezigidi zabanye abavakashela isonto lombhishobhi i-Notre Dame eParis. Kuhle ngaphandle, futhi elihle ngaphakathi, Umgcinimafa wesonto lesonto elikhulu uzokuyisa phezulu ngaphezu kwedolobha elinothando kakhulu emhlabeni, ngoba ukubukwa-panoramic.
UMama wethu ume e-Ile de la Cite futhi unikezelwe eNcasakazini Ebusisiwe. Ngaphezu kwalokho, isonto lombhishobhi kwakuyindawo yemicimbi emikhulu njengokugcotshwa kukaNapoleon Bonaparte, kanye nokugcotshwa kukaJoan wase-Arc. Ngakho, amehlo akho azobe ebabaza ubuhle bokwakhiwa kwethempeli elikhulu, nezindlebe zakho zibabaza izindaba zenkazimulo.
11. Ama-Cathedrals Athakazelisa Kakhulu EYurophu: I-Saint Mark's Basilica, Venice
Ingenye yamabhilidi amahle kakhulu eYurophu, kodwa kuyizinsalela eziyimfihlo ezihlala eSaint Mark's Basilica, okwenza kube isonto elikhulu elithandekayo kunazo zonke eYurophu. Ngokwezinganekwane, I-Saint Mark's Basilica yakhelwa ukufaka izinsalela zikaMark umvangeli, omunye wabaphostoli abane, ngemuva kokuthi abathengisi bangene bevela eGibhithe. Le ndaba ifaka owesi-13 KaMose kwekhulu, ngenhla komnyango wesobunxele njengoba ungena esontweni.
Ngaphezu kwalokho, ISaint Mark's Basilica inegugu eliyigugu kakhulu kuneligugu lomqhele waseRoyal Family - iPala dOro. IPala inguquko yaseByzantiya, kugcwele okungaphezu kwe- 2000 amatshe ayigugu. ukuze uphethe, uma uhlela ukuvakashela ingqophamlando eyodwa eVenice, ISaint Mark's Basilica iyona, yokufuna ukwazi, ubuhle nabahambi abathanda umlando.
EMilan ukuya eVenice Ngesitimela
I-Bologna eya eVenice Ngesitimela
UTreviso uya eVenice Ngesitimela
12. St. IVitus Cathedral, ePrague
Ngaphesheya kwemifula, namabhuloho, Enqabeni Prague Castle, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to 6 emakhulwini eminyaka ukuqeda i-gothic cathedral, endaweni ephawulekayo futhi ephawuleka kakhulu ePrague. Isikhathi esathathwa ukwakha i-Saint Vitus Cathedral siyabonakala enhlanganisweni yezitayela zokwakha.
Isonto elikhulu iSanta Vitus line-Renaissance, Gothic, futhi izakhi Baroque: njengomphetho wombhoshongo oseningizimu nohlaka olukhulu engxenyeni esenyakatho. Amafasitela anengilazi enamabala ayinto ephawulekayo kunoma yiliphi isonto elikhulu laseSt. Amafasitela kaVitus awaweli ebuhleni avela kwamanye amasonto ababhishobhi aseYurophu.
We uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo olungenakulibaleka kulezi 12 amasonto ababhishobhi athakazelisayo eYurophu ngesitimela, Faka umhlaba we Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “ 12 Iningi Lamathempeli Athakazelisa EYurophu ”ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Beautifulcathedralseurope Cathedral Duomo famouscathedralsineurope FascinatingCathedrals
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eDenmark, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe